Home News Hay’ad Dowlada Libiya Ku Warejisay Muhajirin Ay Somali Ku Jiraan Oo Laga...
Hay’ad Dowlada Libiya Ku Warejisay Muhajirin Ay Somali Ku Jiraan Oo Laga Ganacsanayay
Waaxda La dagaalanka sharci darada qeybteeda Liibiya ayaa maanta oo talaado ah sheegay in dib loo celiyay dad gaaraya 123 qof oo kasoo kala jeeda Somalia, Eritrea iyo Nigeria.
Hay’adda ayaa sheegtay in dadkaan ay kamid ahaayeen Ajaaniibta Liibiya ee lagu kala Ganacsato, lacagana lagu kala qaato sii deyntooda.
Waaxda ayaa intaa raacisay in dadka kasoo jeeda Dalka Nigeria dib loogu celiyay Dalkooda, lagana duuliyay Garoonka Diyaaradaha ee Mitiga International Airport oo 8 KM u jira Caasimadda Liibiya ee Tropoli.
Dadkaan ayaa Qaaditaankooda waxaa gacan ka geystay Hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobe u qaabilsan ee loosoo Gaabiyo UNHCR, Dadka kasoo jeeda Nigeria ayaa laga dajiyay Casimadda Dalkaasi.
Hay’adda Socdaalka Adduunka (IOM) ayaa ku guuleysatay bilawgii bishaan Febraayo soo deynta dad gaaraya 277 qof oo kamid ahaa dhibanayaal ku xirnaa Liibiya, waxayna kasoo jeedeen dalal Afar ah oo Qaaradda Afrika dhaca.
Kaliya waxa ay Hay’addu Sheegtay Tirada guud ee dadka lasoo celiyay, lagumana xusin tirada dalalka ay kasoo jeedaan.
Dowladda Federaalka ayaa dib Soomaaliya bishaan ugu soo celisay dad isugu Jiray, Carruur, Haween iyo Dhalinyaro, kuwaa oo ay Dowladdu sheegtay in ay ku jireen Gacanta Kooxaha loo yaqaan Magafayaasha.
Qaramada Midoobe oo Kaashaneysa Hay’adaha Qaxootiga iyo Socdaalka Adduunka ayaa wada dib u celinta Tahriibayaasha ku sugan Dalka Liibiya, kuwaa oo kolkii horay u tagay in ay kaga sii talaabaan Biyaha Mediterranean-ka si ay Dalalka Yurub u gaaraan.